သမားရိုးကျမဟုတ်ပဲ ထူးဆန်းတဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေ ရှိကြတဲ့ K-Pop Idol များ | News Bar Myanmar
သမားရိုးကျမဟုတ်ပဲ ထူးဆန်းတဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေ ရှိကြတဲ့ K-Pop Idol များ
ဓါတ်မတည့်မှုဆိုတာ လူသား​တွေနဲ့ မစိမ်းတဲ့ ​ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ ဓါတ်မတည့်မှု​တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ တချို့က​တော့ အစားအ​သောက်နဲ့ ဓါတ်မတည့်တာ၊ တချို့က​​တော့ အရာဝတ္ထု​တွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်တာ စသဖြင့် ရှိကြ​ပေမဲ့ သာမန်အားဖြင့် ပဲ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ အ​စေ့အဆံစတဲ့ စားစရာ​တွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်တာ အများဆုံးဖြစ်​​လေ့ရှိကြပါတယ်။ အခု​ဖော်ပြ​ပေးသွားမှာက​တော့ အဲ့လိုမျိုး သမားရိုးကျမဟုတ်ပဲ ထူးဆန်းတဲ့ ဓါတ်မတည့်မှု​တွေ ရှိကြတဲ့ K-Pop Idol ​တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူ​တွေလဲဆို​တော့ ..
ဂျပန်​နိုင်ငံသူဖြစ်တဲ့ TWICE အဖွဲ့ဝင် Momo က​တော့ Salmon ငါးနဲ့ မတည့်တဲ့အတွက် လုံးဝစားလို့ မရပါဘူး။
2. ​Jihyo (TWICE)
နောက်ထပ် TWICE အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Jihyo က​တော့ နာနတ်သီးနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုရှိပါတယ်။ တစ်ခါက သူမဟာ ပရိသတ်တစ်ဦးကို နာနတ်သီး စားမိရင် လည်​ချောင်း​တွေ ယားယံလာတယ်လို့ ​ပြောပြဖူးပါတယ်။
GOT7 အဖွဲ့ဝင် Youngjae က​တော့ သခွားသီးနဲ့ မတည့်ပါဘူး။ အစိမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အချဉ်စိမ်ထားတာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် စားလိုက်မိတာနဲ့ ပြန်အန်ထွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
GFRIEND အဖွွဲ့ဝင်​ဟောင်း SinB က​တော့ ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ စပျစ်သီးနဲ့ ဓါတ်မတည့်ပါဘူးတဲ့။
CIX အဖွဲ့ဝင် Bae Jinyoung က​တော့ ပုစွန်ကို စားလို့မရပါဘူး။ စားမိတာနဲ့ လျှာတစ်ခုလုံး ​ယောင်ကိုင်းလာပြီး စပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်ကာ ယားယံလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
NU’EST အဖွဲ့ဝင် Minhyun က​တော့ ဆိုဒီယမ်ဓါတ်နဲ့ မတည့်ပါဘူး။ ထို့​ကြောင့် ပင်လယ်ဆားငံ​ရေနဲ့ လုံးဝထိ​တွေ့လို့ မရပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်က ထွက်တဲ့ ​ချွေး​တောင်မှ သူ့ကို ယားယံ​စေတဲ့အထိ ပြင်းထန်ပါတယ်။ ထို့အပြင် သူ့မှာ ဖုန်မှုန့်၊ တိရစ္ဆာန်အ​မွှေး၊ ပန်းဝတ်မှုန် စတာ​တွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်တာ​တွေလည်း ရှိပါ​သေးတယ်။
7. Chaeyoung (Fromis_9)
Fromis_9 အဖွဲ့ဝင် Chaeyoung က​တော့ ပန်းသီးနဲ့ ဓါတ်မတည့်တဲ့အပြင် ချယ်ရီသီးနဲ့ မက်မွန်သီးတို့ကိုလည်း စားသုံးလို့ မရပါဘူး။ စားလိုက်ရင် ယားယံ​မှု​တွေ ဖြစ်​ပေါ်​ပေမဲ့ သူမက​​တော့ ဒီအသီး​တွေဟာ သူမ အကြိုက်ဆုံး အသီး​တွေပါတဲ့။
8. Amber Liu
F(x) အဖွဲ့ဝင်​ဟောင်း Amber ဟာလည်း အသီးနဲ့ ဓါတ်မတည့်တဲ့ ​နောက်ထပ် Idol တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမနဲ့ ဓါတ်မတည့်တဲ့ အသီးက​တော့ သရက်သီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
​နောက်ထပ် F(x) အဖွဲ့ဝင်​ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Krystal ကလည်း ပန်းသီးနဲ့ ဓါတ်မတည့်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့လည်း သူမဟာ ပန်းသီးကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။
DAY6 အဖွဲ့ဝင် Jae က​တော့ ပန်းသီးကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ အသီး​တွေ အားလုံးနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှု ရှိ​နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
11. Peniel (BTOB)
BTOB အဖွဲ့ဝင် Peniel က​တော့ ဖရဲသီးနဲ့ မတည့်ပါဘူး။
12. Onew (SHINee)
SHINee အဖွဲ့ဝင် Onew က​တော့ သခွားသီးနဲ့ melon အမျိုးအနွယ် အသီး​တွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖရဲသီး၊ သမွှား​မွှေးသီးစတဲ့ melon အမျိုးအနွယ် အသီး​တွေကို စားသုံးလို့ မရပါဘူး။
Highlight အဖွဲ့ဝင် Gikwang က​တော့ ပင်လယ်စာကို စားသုံးလို့ မရပါဘူး။ အထူးသဖြင့်က​တော့ ခရုနဲ့ ကမာ​ကောင်​​တွေပါ။ သူ့ရဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုက ထင်​သ​လောက် မပြင်းထန်​ပေမဲ့ ကမာ​ကောင်​ဟင်းကို​ အနံ့ရတာနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး ယားယံလာတတ်ပါတယ်။
14. Dawon (SF9)
SF9 အဖွဲ့ဝင် Dawon က​တော့ ငါးအစိမ်း​တွေနဲ့ မတည့်ပါဘူး။ Sushi, sashimi စတာ​တွေနဲ့ မချက်ပြုတ်ရ​သေးတဲ့ ငါးမှန်သမျှဟာ သူ့ခန္ဓါကိုယ်မှာ ယားယံမှုတွေ ဖြစ်​ပေါ်​စေပါတယ်။ ထို့​ကြောင့် SF9 အဖွဲ့ဝင်​တွေ sushi ဆိုင်သွားပြီဆိုရင် Dawon က ချက်ပြုတ်ပြီးသား စားစရာ​တွေကိုပဲ မှာယူစား​သောက်ရပါတယ်။
Next အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်သေးသွယ်တဲ့ခါးလေးတွေရဲ့ပိုင်ရှင် တရုတ်မင်းသားချောများ »
Previous « BTS အဖွဲ့ဝင်​​တွေနဲ့ အလုပ်အတူတွဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ "Hospital Playlist" ဒါရိုက်တာ Shin Wonho